Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Dilkii Gudoomiye ku-xigeenkii Maamulka iyo Maaliyadda Degmada wanlaweyn | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Dilkii Gudoomiye ku-xigeenkii ...
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Dilkii Gudoomiye ku-xigeenkii Maamulka iyo Maaliyadda Degmada wanlaweyn
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax Caawa lagu dilay Guddoomiye ku-xigeenkii Maamulka iyo Maaliyadda Degmada Wanla-weyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose oo ka dhacay gudaha degmadaas.
Qaraxaas oo ahaa Bambada nooca gacanta lagu tuuro ah ayaa waxaa la sheegay in rag hubeysan ay ku weerareen Guriga uu Wanla-weyn ka deganaa Marxuum Maxamed Cabdullaahi Koosto, isla markaana waxaa ka dhashay Khasaaro kala duwan.
Dadka deegaanka ayaa waxaa ay sheegeen in jugta qaraxa mar qura laga maqlay gudaha degmada, uuna ku geeriyooday Guddoomiye ku-xigeenkii Maamulka iyo Maaliyadda Degmada Wanla-weyn Maxamed Koosto.
Sidoo kale Qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay Aabaha dhalay Guddoomiye Maxamed Koosto iyo xaaskii uu qabay Marxuumka, kuwaasi oo xiliga uu weerarka dhacayay ku sugnaa guriga, waxaana dhaawacyadooda loo qaaday Xarun Caafimaad.
Ciidamo ka tirsan Maamulka Degmada Wanla-weyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose iyo kuwa Dowladda Federaalka ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, iyagoo halkaas ka sameeyay baaritaano kala duwan.
Wararka ayaa sidoo kale waxaa ay sheegayaan in Caawa Wanla-weyn uu ka socdo howlgal baaritaano ah, isla markaana lagu raadinayo ragii fuliyay weerarkii Bambaanada ahaa ee lagu dilay Marxuum Maxamed Koosto.
Maqaal horeMaamulka Sh.Hoose oo ka tacsiiyey geeridii kutimid Gudoomiye ku-xigeenkii wanlaweyn
Maqaal XigaXildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulmaya